Zụta Online | Ota Ward Cultural Promotion Association
Mgbe ị bịara ọrụ a ndị nkwado ahụ nyere nkwado, biko lelee “Banyere mbọ ndị otu ahụ na-agba iji gbochie mgbasa nke ọrịa n’oge a na-eme ya” yana “Arịrịọ nye onye ọ bụla bịara ọrụ ahụ” tupu ị bịa ebe ahụ.
Banyere mbọ ndị otu a kpuchitere ịgbasa ọrịa n'oge arụmọrụ ahụ
Rịọ onye ọ bụla bịara arụmọrụ
Ndoputa site na intaneti
Ọ dị 24 awa ụbọchị. (Ewepu oge nlekọta site na 3: 4 ruo XNUMX: XNUMX am)
A choro ndebanye aha ndị otu tupu iji ọrụ ahụ.
Maka oche echekwara, ị nwere ike ịhọrọ akara oche kachasị amasị gị.
Biko gaa n'ihu na ntanetị gaa na peeji ntanetị.
Ota Ward Cultural Nkwalite Association nke Usoro Ojiji (2021 nyocha)
Kaadị akwụmụgwọ (VISA / Master / JCB / AMERICAN EXRESS / Diners Club)
Ego nkịtị (naanị mgbe ị na-enweta tiketi na FamilyMart)
Esi enweta tiketi
・ Enwere ike ịme ndoputa ruo elekere 19:00 ụbọchị tupu arụmọrụ ahụ.
・ Enweghị ndebanye aha iji ọrụ tiketi MOALA.
・ Can nwere ike ịlele ozi nzụta na My Page na Ota Ward Cultural Promotion Association tiketi dị n'ịntanetị.
・ A ga-eziga URL nke ozi tiketi ahụ na adreesị ozi-e (smartphone) debanyere aha otu izu tupu arụmọrụ ahụ.
・ A ga-akwụ ụgwọ ego dị iche nke yen yen 150 maka mpempe akwụkwọ ọ bụla.
* Ekwentị na mbadamba ndị ọzọ na-abụghị smartphones enweghị ike iji.
・ Biko mee "Fami Port" awụnyere na ụlọ ahịa ahụ ma bulie ya na ndekọ ego.
Nke 1 (koodu ụlọ ọrụ "30020") Na nọmba nke abụọ (nọmba mgbanwe (nọmba iri na anọ na-amalite na 2)) chọrọ.
Pịa ebe a maka etu esi eji akwụmụgwọ nke FamilyMart
Enwere ike ịme ndoputa izu abụọ tupu ụbọchị arụmọrụ.
Anyị ga-enyefe ya site na Yamato Transport.
・ Ọ bụrụ na ịnọghị, enwere ọrụ mgbapụta yana ụbọchị na oge akọwapụtara.
・ Na mgbakwunye na ụgwọ tiketi, a ga-akwụ ụgwọ ego mbufe nke yen 450 maka tiketi ọ bụla.
Tiketi enweghị ike gbanwere, gbanwee ma ọ bụ kwụghachi.
Agaghị eji tiketi ọ bụla ọnọdụ (furu efu, gbaa ọkụ, mebiri emebi, wdg).
Na ụkpụrụ, usoro nnata kpebiri n'oge nzụta enweghị ike ịgbanwe.
Nbunye bụ naanị ụlọ.Anyị anaghị ebu ụgbọ mmiri na mba ofesi.
Ọ bụrụ na ịnataghị nnyefe e-mail na-akpaghị aka site na ọrụ tiketi ịntanetị Dnyefe site na ihe nkesa na-emekarị data nwere ike ikpe ikpe dị ka ozi-e junk.Biko rụtụ aka na ndị na-esonụ maka ụdị usoro nkwado.
Etu esi eji tiketi dị n'ịntanetị
Biko rụtụ aka na vidiyo na-esonụ maka otu esi edebanye ma zụta tiketi n'ịntanetị.
Otu esi edebanye aha dika onye ozo na ntanetị
Esi zụta tiketi n'ịntanetị
Rịba ama banyere machibidoro tiketi resale
Banyere igbochi nke ire ere tiketi